Ngokubanzi - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 4)
Uqinisekisa njani iakhawunti yethu ye-Instagram
Izaziso ezingezizo ziye zaba yenye yezinto ezimbi zenethiwekhi yoluntu kule minyaka mibini idlulileyo. Kwaye nditsho kule minyaka mibini idlulileyo, ukuba ekugqibeleni uzikhuthazile ukuba uqinisekise iakhawunti yakho ye-Instagram, kweli nqaku sikubonisa onke amanyathelo oza kuwalandela ukuze ukwazi ukukwenza ngokukhawuleza.
Ubuncinci okwangoku sinokuthintela iNetflix ukuba ingasibonisi iintengiso zayo phakathi kwezahluko, sikubonisa ukuba ungayenza njani.
I-Sonos Beam, sijonga kwakhona eyona bar yesandi
I-Sonos Beam, sikuxelela iimpawu zayo, ixabiso kwaye kunjalo sihlalutya zonke iinkcukacha ukuze wazi ukuba kutheni kukho intetho engaka ngale mveliso.
Ungabelana njani nevidiyo ye-IGTV kuFacebook
Funda indlela yokwabelana ngeevidiyo zakho kwi-IGTV, kwiqonga levidiyo entsha epheleleyo ye-Instagram, kwiphepha lakho likaFacebook.
Khuphela phantse nayiphi na ividiyo ngolu lwandiso lweChannel
Funda indlela yokukhuphela iividiyo phantse kulo naliphi na iphepha lewebhu kwikhompyuter yakho ngenxa yolu lwandiso lweGoogle Chrome.
I-WhatsApp kunye noGoogle bajoyine imikhosi, i-backups ayizukuyisebenzisa
UGoogle noWhatsApp basandula ukubhengeza umanyano oluza kusivumela ukuba sigcine i-WhatsApp kwi-Google Drayivu ngaphandle kokuhlala kwindawo yethu.
Sikuzisa isifundo esincinci ukuze uqonde ngokupheleleyo ukuba iCitypaq isebenza njani kwaye singenza njani ukuze senze ubomi bethu bube lula.
I-Barcelona kwaye ngakumbi ngakumbi iiGranollers, yindawo ekhethiweyo yeeVenkile ezilandelayo zeMi
Izolo iXiaomi Mi 8 ifike ngokusemthethweni kwilizwe lethu kwaye namhlanje sifumana iindaba ze ...
I-European Union ifuna imithombo yeendaba zentlalo isuse umxholo obaxekileyo kwiyure
Iinethiwekhi zentlalo kunye nokusetyenziswa kwemiyalezo kuyeyona ndlela yokunxibelelana, hayi nabahlobo kunye nosapho lwethu kuphela, kodwa i-European Union isebenza uyilo oluya kuthi lunyanzele zonke iiwebhusayithi ukuba zisuse umxholo we-extremism kwisithuba esingaphantsi kweyure kupapasho.
Uyithumela njani i-eBooks yakho kuhlobo lwakho usebenzisa iTelegram
Funda indlela entsha, elula kakhulu nekhawulezayo yokuthumela ii-eBooks zakho ozithandayo kumfundi wakho onobubele, kuyo yonke iTelegram
Eyona midlalo bhanyabhanya kunye nothotho lokubukela kwiNetflix nakwiHBO ehlotyeni
Sikuzisa ingqokelela yeefilimu ezingcono kakhulu onokuzibukela kwezona zinto ziphambili zisasaza umxholo njengeNetflix kunye neHBO.
Uyenza njani uluhlu lokudlala kunye neengoma omamele kakhulu kwiSpotify
Yenza uluhlu lwadlalwayo ngeengoma kunye namagcisa omamele kakhulu kwiakhawunti yakho yeSpotify ngokulula nangokukhawuleza.
Zingaphi iindidi ze-HDR ezikhoyo kwaye yintoni umahluko?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze-HDR, nganye inezakhono zayo kodwa zonke zinomxholo ofanayo, masibone ukuba zahluke njani.
UMashable ulumkisa ngokuqhekeza okukhulu iiakhawunti ze-Instagram
Kubonakala ngathi namhlanje emva kwemini kushenxiselwa amakhulu abasebenzisi benethiwekhi eyaziwayo ye-Instagram, kwaye ...
Le teknoloji inako ukugcina yonke imixholo yengqondo yakho
Le nkampani yaseMelika ibanga ukuba inako ukugcina yonke imixholo yengqondo yakho kwaye iyigcine kangangamakhulu eminyaka.
Ngaba unayo ifowuni ye-Samsung Galaxy? Khuphela i-APK ye-Fortnite
Yindlela ekulula ngayo ukukhuphela i-Fortnite APK kwifowuni yakho ye-Samsung Galaxy, ukuba nje unayo enye yeemodeli ezifanelekileyo.
I-Galaxy Watch kunye neKhaya leGalaxy, sikubonisa iimveliso ezintsha ze-Samsung
Nge-Galaxy Watch sifumana i-smartwatch esinoyilo olungqingqwa, kwaye iGlass Home, isithethi esikhuphisanayo esikrelekrele se-HomePod, siyaboniswa.
Ezi ziziphelo ezinokuhlaziywa kwi-Android Pie ukusukela ngoku
Siza kukuxelela ukuba zeziphi iiterminal ezinokuthi zihlaziywe kwi-Android Pie kwaye zeziphi eziya kufumana uhlaziyo kwiiveki ezizayo.
ILogitech isungula itshaja engenazingcingo ngentsebenziswano neApple
Kule meko, iApple kunye neLogitech bajoyine izandla kwakhona, ngeli xesha ukubonelela ngetshaja engenazingcingo yoyilo olwahlukileyo
I-Android 9 Pie, iqhubela phambili kumhla wokulindelwa okulindelweyo kwaye sele isemthethweni
Eminye imithombo ibeke iphambili yaseburhulumenteni yale nguqulo ngo-Agasti 29 olandelayo, kodwa ekugqibeleni entsha ...
Intsholongwane yekhompyuter kwi-TSMC ibangela iingxaki kwimveliso yeApple, NVIDIA okanye iQualcomm
Intsholongwane ibangela ukuba i-TSMC ibeneengxaki kwimveliso ye-chip. Fumanisa ngakumbi malunga neengxaki zemveliso yomvelisi ngenxa yentsholongwane.
Le yimidlalo yasimahla ye-PlayStation Plus kunye ne-Xbox Live yeGolide ka-Agasti 2018
Ihlobo selifikile, iPlayStation Plus ibandakanya imidlalo yasimahla ka-Agasti yeMafia III kunye ne-Xbox Live Gold yokubheja kwiNhlonipho.
Esi sisibane esitsha se-Trust ye-LED, esinye sazo ngokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu lunetshaja emakhaya evumela ukuba ubize izixhobo zakho ze-elektroniki kunye.
Sivavanye i-A60 kunye nee-Mini bulbs ezivela kwifemu yeLifx
Sikuzisa uhlalutyo lweebhalbhu ezimbini ezidumileyo ezivela kwiLifx, enye yeefemu zokukhanyisa ezibaluleke kakhulu.
Ungayifumana njani ukuba ikhona idilesi ye-imeyile
Phuma kumathandabuzo kwaye ufumanise ukuba ikhona na idilesi ye-imeyile onayo engqondweni kodwa ungazi ukuba ichanekile na.
Ukwazi njani ukuba iphepha lewebhu likhuselekile
Kwisixhobo seActualidad sikuxelela amaqhinga afanelekileyo ukuze wazi ukuba iphepha lewebhu likhuselekile.
Olu luhlu lukuvumela ukuba uyazi ukuba ifowuni yakho ye-Android iyahambelana neFortnite
Sikubonisa uluhlu lwezixhobo ezihambelana neFortite ye-Android, ungaphoswa kwaye ufumane ukuba i-smartphone yakho iyakwazi ukuyiqhuba.
Le vidiyo isibonisa i-iPhone 2018 entsha esebenza
Kwiveki yokuqala kaSeptemba, mhlawumbi kwiveki yesibini kule veki idlulileyo, inkampani esekwe eCupertino iya kuzisa uluhlu olutsha lwe-iPhone, a Oku kuyindlela entsha ye-2018 ye-iPhone enokubonakala ngathi ukuba amarhe ahambelana nesi sixhobo aqinisekisiwe.
I-Fortnite ayizukubakho kwiGoogle Play Store, ndingayifaka njani?
I-Fortnite ayizukufumaneka kwiGoogle Play Store, sikubonisa indlela yokufaka i-Fortnite kwi-Android ukuze udlale ngokulula.
Enye indlela yokukhuphela umculo simahla
Khuphela umculo kwi-intanethi ngefomathi ye-Mp3 ngokulula nangokukhawuleza ngokulandela esi sifundo silula.
Ukuba ufuna ukucima yonke iposti yakho yeprofayile ye-Facebook, landela esi sifundo ukuze ufunde ukuba njani.
Sinohlalutyo kunye nazo zonke iinkcukacha kunye neempawu ze-Energy Headphones 2 yeBluetooth, fumana le mveliso.
I-PLC okanye i-WiFi ephindayo? Umahluko kwaye yeyiphi ekufaneleyo ngokwetyala lakho
Siza kukucacisela ukuba yintoni umahluko phakathi kwe-PLC kunye nokuphindaphinda i-WiFi, ke uya kuyazi ukuba yeyiphi na ekufuneka uyisebenzise ngalo lonke ixesha.
Uyilandela njani iNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ka-2018 kwi-Intanethi
Ungaphuthelwa yinkcukacha yebhola ekhatywayo yeNdebe yeHlabathi yeBhola ekhatywayo ye2018 kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo.
Uyenza njani iqela levidiyo kwi-WhatsApp ngoku ziyafumaneka
I-WhatsApp iye yaba liqonga lokuthumela imiyalezo emhlabeni, enkosi ngokuyinxenye kwinto yokuba ibiyi ...
Uya eAndorra? UXiaomi ulungiselela ukuvulwa kweVenkile yakhe yokuqala eAndorra la Vella
Emva kwengxaki ababenayo kwivenkile yaseZaragoza ekuqaleni kwaye balibazisa ukuvulwa kude kube yeyokugqibela ...
Ezona zixhobo zibalaseleyo zeAukey ongaphoswa yileli hlobo
Ukusuka kwisandla sika-Aukey sifuna ukukuzisela uluhlu oluhle lweemveliso kunye neegajethi ongenakuphulukana nazo kweli hlobo ukuze wenze olona holide lwakho.
Iwebsite ye-YouTube sele ikuvumela ukuba ubone iividiyo ezimileyo ngaphandle kwemivimbo emacaleni
Uninzi lwabasebenzisi abarekhoda iividiyo ngokuthe nkqo, ngaphandle kokungafani kweefomathi ezifanelekileyo ...
Sivavanye i-iLife A7 entsha, sisicoci esitsha serobhothi esivela kwifemu yaseTshayina
Sinezandla zethu i-iLife A7, imodeli entsha evela kwinkampani yaseTshayina ethembisa ukuzimela, izinto ezintsha kunye neempawu ezintle.
Ungayicima njani ngokusisigxina iakhawunti yakho yeAmazon
Funda indlela yokucima ngokusisigxina iakhawunti yakho yeAmazon.
KwiActualidad Gadget sibuya nezifundo, sikufundisa indlela yokufihla unxibelelwano kwi-Instagram ukuze bangandiboni kwi-Intanethi.
Inkampani yaseTshayina ithatha amanyathelo amakhulu ngaphaya kokuthengisa iimveliso zombane kwaye ngoku emva ...
Ndingabaleka iFortnite kwikhompyuter yam? Ezi zezona mfuno zisezantsi zomdlalo wefashoni
Ezi zezona mfuno zisezantsi ukuze ukwazi ukusebenzisa iFortnite ngokufanelekileyo nakweyiphi na iPC.
Yintoni ipasipoti yetagram kunye nendlela yokuyisebenzisa
Ipasipoti yocingo, inkonzo edibeneyo ngaphakathi kweTelegram esekwe kwi-blockchain eya kusivumela ukuba sizichonge kwiiwebhusayithi ngedatha yethu yobuqu.
Sihlalutya i-Lenovo S5, eyona nto inesiphelo esinexabiso eliphantsi
Sinezandla zethu kwiLenovo S5, isiphelo sendleko esinexabiso eliphantsi esiya kusibangela ukuba sahlule kwiimbangi zethu ezixabisa ngaphezulu.
Ungayigcina njani kwiNetflix ngokwabelana ngeakhawunti yakho nabahlobo abane
Ngokwabelana ngeNetflix ukuya kuthi ga kubahlobo abane ungagcina uninzi kwaye wonwabele umxholo ngaphandle kwezithintelo.
Sihlalutya iHomtom S7, i-smartphone eneendleko eziphantsi ezineefreyimu ezimbalwa
SineHomtom S7 ezandleni zethu kwaye sifuna ukuyihlalutya ukuze ukwazi ukuzifumanela ngokwakho ukuba yeyiphi na ifowuni ephantsi ekwaziyo ukuyenza.
Iqela leenzululwazi liqinisekisa ukuba uhambo lokuqala luya kwenzeka kule nkulungwane
Iqela lezenzululwazi elikhokelwa nguRonald Mallet livakalise ithiyori eya kuthi ivumele abantu ukuba bahambe ngelixesha leminyaka.
Sihlaziya ikhamera ye-Insta360 Nano S, ikhamera engama-360º enokuhamba nawe nangaliphi na ixesha
Sinezandla zethu i-Insta 360 Nano S, eyona khamera ifanelekileyo ye-360º ehambelana ngokupheleleyo ne-iPhone yakho, uyifumane kunye nathi.
I-Apple HomePod iya kuba nenkxaso yeminxeba kwaye iza kuthetha iSpanish kungekudala
I-HomePod yazisa ngenkxaso yeefowuni. Fumana ngakumbi malunga nokuza kungekudala kwisithethi seApple oku kuwa.
Ekugqibeleni! Ngoku singafaka ulwandiso lweChannel kwiOpera
Faka ulwandiso lwakho oluthandayo lukaGoogle kwiOpera Browser ukwenza ukuba isikhangeli sakho sigqibe ngakumbi kwaye siphucule amava akho omsebenzisi.
UGoogle ubhengeza umsitho wonjiniyela omtsha ngoNovemba
Kule meko, inkampani enekomkhulu layo eMountain View, eCalifornia, ibhengeza umsitho omtsha ojolise ...
I-Facebook iya kubhloka abo bangaphantsi kweminyaka eli-13
UFacebook uya kuvimba iiakhawunti zabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala. Fumana ngakumbi ngamanyathelo amatsha enethiwekhi yokulwa le akhawunti.
Uwulinganisa njani umgangatho we-intanethi yakho nge-FAST, eyona mitha yesantya ibalaseleyo
Ngokufika kwe-ADSL, umgangatho woqhagamshelo lwe-Intanethi kumakhaya ethu uthathe indawo ebaluleke kakhulu, kokubini isantya kunye nomgangatho kunye nendlela yokulinganisa isantya sonxibelelwano lwakho lwe-Intanethi novavanyo olukhawulezayo lwesantya, olukhawulezayo, oluthembekileyo nolugqibeleleyo.
Rekhoda iAmazon ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeemveliso ezithengisiweyo ngexesha le-Prime Day
Nangona kubasebenzisi abaninzi, iNkulumbuso yayingeyonto yokubhala ekhaya malunga nezibonelelo ezisungulwe ngu ...
Uyenza njani ngokwezifiso imvelaphi xa uphendula imibuzo ye-Instagram
Sifuna ukukubonisa ukuba ungayitshintsha njani imvelaphi kwi-Instagram ngokuphendula imibuzo ukuze unike ngamnye kubo imbonakalo yomntu.
I-Twitter imise izigidi zeeakhawunti ukusukela ukuphela kuka-2017
I-Twitter ivale ama-akhawunti ezigidi ezingama-57 ekupheleni kuka-2017. Fumanisa ngakumbi malunga nezigidi zeeakhawunti ezivalwa yinethiwekhi yoluntu.
IJamani iphawula elinye inyathelo elibalulekileyo kugqatso lwenyukliya
Iqela labaphandi baseJamani likwazile ukuphucula i-stellarator yabo, bafikelela kumaqondo obushushu angazange afezekiswe kuvavanyo olufanayo.
IiNtloko zoSuku lweNkulumbuso ngoJulayi 17, 2018
Izolo usuku lwenkulumbuso yaseAmazon luqale nge-12 emini, usuku oluhlala lude ...
Sihlalutya imakrofoni ye-HD Studio Signa evela kwiTrust, iqabane lakho lokusasaza ngokugqibeleleyo
Ithemba le-HD Studio Signa, iqabane lakho elifanelekileyo kwimilambo, imidlalo yokudlala kunye neepodcast ezineempawu ezintle.
Sihlalutya i-iLife V8S irobhothi yokucoca, yenye yezona zigqibeleleyo ngexabiso eliphantsi
ILife V8S irobhothi ekrelekrele yokucoca ekwaziyo ukuhluza, ukutshayela kunye nokucoca isixhobo esinye, ezi ziimpawu kunye namandla.
Ulwaphulo-mthetho olunobuzaza lubonakalise idatha yabathengi beTelefonica
Ifowuni: Ukophula umthetho kukhusela idatha yabucala yabathengi. Fumanisa ngakumbi malunga nokusilela okuchaphazele umqhubi ngokuhlwanje.
Ivenkile yokuqala kaXiaomi eZaragoza ilibazisa ukuvulwa kwayo
Ukuvulwa kwevenkile ezintsha zeXiaomi kuyaqhubeka kwilizwe lethu kwaye kule meko bekuye ku ...
Ungawukhuphela njani umculo weMP3 neFLAC kwiDeezer
Funda indlela yokukhuphela iingoma ezikumgangatho ophezulu kwiifomathi ezingama-3Kbps zeMP320 kunye neFLAC kwikhompyuter yakho simahla ngeDeezer.
Izithethi ze-Sonos ngoku zidlala i-AirPlay 2
U-Apple wazisa isizukulwana sesibini se-AirPlay, i-AirPlay 2, kwisakhelo seNkomfa yonjiniyela kunyaka ophelileyo, ...
Utshintsho ku-Twitter lunokubangela ukuba inani labalandeli bakho liyeke
I-Twitter iyeke ukubala iiakhawunti ezivaliweyo njengabalandeli. Fumanisa ngakumbi malunga nento entsha eye yaziswa kwinethiwekhi yoluntu.
Ubeka njani izitikha zemibuzo kumabali e-Instagram ngokulula
Ngoku ungongeza izitikha ezivumela ababukeli bamabali akho ukuba bakubuze imibuzo ngokulula, sikubonisa ukuba wenza njani.
Ukubetha eAmazon ngoSuku lweNkulumbuso: akukho sivumelwano kunye neemanyano zabasebenzi
Abasebenzi baseAmazon kwindawo yokugcina izinto eSan Fernando de Henares babize uqhankqalazo oluhambelana nokubhiyozela uSuku lwePrime.
I-Apple ifaka i-1Password kubo bonke abasebenzi benkampani
I-Apple ithenga iilayisensi zePassword zabo bonke abasebenzi bayo. Fumanisa okungakumbi malunga nalo msebenzi abaya kuthi basebenzise usetyenziso lwegama eligqithisiweyo.
Yintoni imo ye-incognito ye-YouTube kwi-Android kunye nendlela yokuyisebenzisa
Ngoku i-YouTube ye-Android ifake imowudi yayo ye-incognito, ke sikubonisa ukuba yintoni kwaye uyenza njani ukuba isebenze.
I-SPC ivuselela uluhlu lwayo lwee-headphone ezingenazingcingo kunye nezithethi ezigubungela zonke iimfuno zemihla ngemihla
Abafana abavela kwi-SPC babonisa uluhlu lwabo olutsha lwee-headphones ezingenazingcingo kunye nezithethi ezijolise ekusivumeleni ukuba sihambise isandi esipheleleyo.
UXiaomi uya esidlangalaleni namhlanje ngexabiso elimalunga ne-46.000 yezigidi ze-euro
Kusele into encinci kuthi ukubona le nkampani inkulu yaseTshayina ikhokelela kubo bonke abasebenzisi ...
UDrake ukhupha uhlaziyo lwealbhamu yakhe yeScorpion
UDrake ukhupha uhlaziyo lwealbhamu yakhe yeScorpion. Fumana ngakumbi malunga notshintsho olwenziwe kwidiski ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Ngenxa yoko kwenzekileyo e-United States nakwiinkampani zase-China, i-ZTE ifuna ukuqhubeka nokusebenza kwi ...
Namhlanje sikubonisa i-minidrone ebesiyivavanya kangangeentsuku ezininzi kwaye isishiye sinencasa ...
Kidy: Injini yokukhangela ekhuselekileyo eyenzelwe ngokukodwa abantwana. Fumana ngakumbi malunga nale injini yokukhangela ethi icoca umxholo ongalunganga.
Uyabela njani indlela emfutshane yekhibhodi yokuQhawula kuyo Windows 10
Siza kukubonisa indlela onokuthi ngokulula unike indlela emfutshane enqumlayo kwi-Snipping app ngaphakathi Windows 10.
Uyazi njani ukuba zeziphi izicelo ezinokufikelela kwiakhawunti yethu ye-Gmail
Imicimbi yabucala sele ingaphezulu kwesiqhelo. Ngelishwa, zonke ezi ngxaki ziqala ukudinwa ...
Abasebenzisi beSpotify bafumana imbuyiselo kwintengiso rhoqo yeDrake
Abasebenzisi beSpotify bafumana imbuyiselo yentengiso kwi-albhamu kaDrake. Fumanisa ngakumbi ngezi zaphulelo kwinkonzo yokusasaza.
Indlela yokwenza kuphela ngumlawuli onokubhalela kwiqela le-WhatsApp
Sikubonisa ukuba ungawenza njani okanye uwaqwalasele njani la maqela apho ngumlawuli kuphela onokubhala enze i-WhatsApp ibe yindawo engcono kakhulu
I-Tesla ibetha iithagethi ezingama-5.000 3 ngeveki
I-Tesla ifikelela kwinjongo yokuvelisa ii-5.000 Model 3s kwiveki enye. Emva kweenyanga zokulibaziseka, uTesla ekugqibeleni ufikelela kwimodeli yokujolisa kwimveliso 3.
Fumana iiplanethi ezimbini ezintsha ezineempawu ezifanayo kakhulu noMhlaba
Iqela leenkwenkwezi ezidumileyo likwazile ukufumana iiplanethi ezimbini ezisesibhakabhakeni ezinesakhono sokubamba ubomi kumphezulu wazo.
Uyigcina njani idatha usebenzisa iSpotify Lite, uguqulelo oluchumisayo lweSpotify
I-Spotify Lite iza kwi-Anadroid, sikubonisa ukuba ungayigcina njani idatha ngeempawu zayo kwaye wenze olona hlobo lomculo kuhlobo lwe "lite".
Ubushushu bufikile ke sikuzisela ingqokelela encinci yeemveliso zokuhamba ehlotyeni ngeyona ndlela intle kakhulu.
Uwongeza njani umculo kwiBali le-Instagram
Sikubonisa ukuba ungawongeza njani ngokulula umculo kwiBali le-Instagram ngesi sixhobo sitsha.
Iglasi ye-Elite Elite, uyibeka njani eyona glasi ifanelekileyo kwi-smartwatch yakho
Siza kukufundisa indlela yokubeka iglasi enomsindo kwi-smartwatch yakho, kwaye ngaphezulu kwako konke ukuba zithini iimpawu zeli Glasi Elite Elite.
Iindaba ezivela kwi-HBO kunye neMovistar + kaJulayi 2018
Ngaphandle kwento yokuba ihlobo sele liphakathi kwethu, kunye nokusetyenziswa kweTV kuncitshisiwe, iinkonzo eziphambili ze-VOD ziyaqhubeka nokwandisa ikhathalogu yazo.
IGranada kungekudala iza kuba neVenkile yayo yokuqala esemthethweni
Emva kwamanye amarhe kunye neenkcukacha zendawo entsha enokubakho kwenye ivenkile yeXiaomi, inkampani yaseTshayina iyangqina ...
Abadlali bachitha i-80 yeedola kwi-avareji kwimpahla ye-Fortnite. Fumana ngakumbi malunga nengeniso enkulu yeMidlalo ye-Epic enkosi kulo mdlalo.
Enkosi kwi-Alien Stick ye-SPC, sinako ukuyiguqula ngokukhawuleza i-TV yethu ibe yi-Smart TV ngaphezulu nje kwe-euro ezingama-50.
Sikuxelela ubuqhetseba obukuvumela ukuba umamele ii-audios ze-WhatsApp ngasese, nge-earpiece yeefowuni.
Ukuba udiniwe kukufumana izaziso kwi-smartphone yakho ngalo lonke ixesha ividiyo entsha ilayishwa kwiqonga le-IGTV le-Instagram, siza kukubonisa ukuba singayiphepha njani.
Umphathi omkhulu we-Intel urhoxile ekubeni nobudlelwane nomqeshwa
Kubonakala ngathi uBrian Krzanich, i-CEO ye-Intel uyishiya i-ofisi emva kokuba kubonakale esidlangalaleni ukuba wayenobudlelwane obumanyeneyo nomqeshwa ...
Ungasisebenzisa njani kwaye wenze ijelo le-IGTV, umabonwakude omtsha we-Instagram
Siza kukubonisa indlela onokuthi usebenze kwaye wenze ngayo ijelo kwi-IGTV, umabonwakude omtsha we-Instagram.
Mini yasekhaya kaGoogle, sihlalutya owona mncedisi ungabizi emva kokufika eSpain
Besivavanya iMini yasekhaya yakwaGoogle kwaye apha sikushiya umbono wethu, nangona kwasekuqaleni siza kukuxelela ukuba sinokudana okukhulu.
Uyithetha njani ibhiya ngesiRashiya? Eli lelinye lawona magama aguqulelweyo emhlabeni
Kwaye lo mbuzo usishiya nolunye ulwazi olubaluleke kakhulu kuthi abo basebenzisa usetyenziso lokuguqula okanye izixhobo kwi ...
I-Bose Sleepbuds: Ingxolo-yokucima ii-headphone ukuze ulale ngcono
I-Bose Sleepbuds: Iifowuni eziphathwayo zokulala okungcono. Fumanisa ngakumbi malunga ne-headphone zokuqala zebrendi ukunqanda ingxolo ngelixa ulele.
AyisiyiTesla kunye neApple kuphela ecinga ngeplanethi. SEAT ineepaneli ezingama-53.000 zokubamba ilanga
Xa sithetha ngamandla acocekileyo, iinkampani zaseMelika iTesla okanye iApple, phakathi kwezinye ezininzi, zize engqondweni ...
IHolidu isungula iApp yayo ekhawulezileyo yeApple
UHolidu ubhengeza ukumiliselwa kweApp yeAustralia. Fumana ngakumbi malunga nenye yeeNkqubo zoNyaka zaNgoku nje kwicandelo lokhenketho.
Ikhaya likaGoogle kunye neMini yasekhaya yakwaGoogle sele ikhona eSpain
Izipikha ezikrelekrele zikaGoogle, iKhaya kunye neMini yasekhaya, sele zikhona eSpain, nge-159 kunye ne-59 ze-euro ngokwahlukeneyo.
Umculo ku-YouTube kunye nePremiyamu yeYouTube sele ikhona eSpain
Inkonzo yokusasaza umculo ekudala ilindelwe ngoku iyafumaneka eSpain ukuma kwiApple Music nakwiSpotify
Ngokukhanyela amahemuhemu ngokufika kwemidlalo kwiNetflix
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kuye kwavela amarhe malunga nokuba iNetflix inokongeza imidlalo kwiqonga layo ukugqibezela ibango ...
Awusenakho ukubhukisha u-Uber kwi-Google Maps app. Ukusetyenziswa kukaGoogle kususa ithuba lokugcina indlela.
Ithebhulethi yamandla Ipro 4, sihlalutya le thebhulethi ngesikrini esigcweleyo se-HD kunye noyilo lwepanoramic
Siza kuhlalutya i-Energy Tablet Pro 4, ushicilelo lwamva nje lwezona zinto zibalaseleyo kwiipilisi ezivela kwiqela le-Energy Sistem ngesikrini esigcweleyo seHD kunye neXtreme Sound,
Phumelela enye yeRowenta Smart Force Essentials esikunika yona kule veki!
Siza kubamba izinto ezimbini ezibalulekileyo zeSmart Force, irobhothi yeRowenta yazo zonke iintlobo zemigangatho esiyihlalutye kule ndlu.
I-CUCA, ibhayisekile yombane enokuthwala abakhweli ababini
I-CUCA yibhayisikile yombane enoluhlu oluya kuthi ga kwiikhilomitha ezingama-40 kwaye inika ithuba lokuhambisa abantu ababini
UKapersky kwindawo ebonakalayo ye-European Union
Isoftware kaKapersky yezokhuseleko ayinalo ixesha elimnandi kwaye iPalamente yaseYurophu ifuna ukuyisusa ...
Ukuphela kwempikiswano, Mnu. Granbomba akanatyala kwityala laseCaranchoa
Emva komyalelo weJaji, impikiswano ifikelele esiphelweni, uMnu Granbomba ukhululwe kwelityala lika "Caranchoa" ligunya elifanelekileyo.
I-Apple ibanga ukuba idale imisebenzi eyi-1,76 yezigidi eYurophu. Oko Yinyaniso?
I-Apple ibanga ukuba idale imisebenzi eyi-1,76 yezigidi eYurophu. Fumana ngakumbi malunga nengxelo yengqesho yeCompertino.
I-PlayStation 5 inokufika ixhotyiswe ngesixhobo se-AMD esikhethekileyo se-AMD
Ngokwamahemuhemu, uSony ubonakala esebenza kunye ne-AMD kuphuhliso lwezixhobo ezithile eziza kunika ubomi kwi-PlayStation entsha.
Olu luhlaziyo olutsha lweMicrosoft Office 365
Sifumene olona hlaziyo lufanelekileyo kwiinyanga ezidlulileyo zeOfisi 365, kunye nophuculo loyilo kunye nezinye izinto eziluncedo.
I-US ngesilumkiso emva kokubhengezwa ukuba i-China izokwakha eyayo i-HAARP
Ngaphandle kweethiyori ezinkulu zelenqe, i-China isandula ukubhengeza ukwakhiwa kwe-HAARP radar, iindaba ezixhalabisa kakhulu e-United States.
I-Lenovo ThinkPad P52, irhamncwa eline-128 GB ye-RAM
I-Lenovo Thinkpad P52, ilaptop efuna ukusinika ithuba lokuba singabonisi nto ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-128 GB ye-RAM.
Inkqubo yokhuseleko lwasekhaya yaseRing iya kwintengiso ye $ 199
Sifundile ukuba ngomhla wesine kaJulayi inkqubo yezokhuseleko yeRing iyakubetha imakethi yaseMntla Melika ukusuka kwi- $ 199.
I-Tesla izakuzama ukuba yinzuzo ngokuyeka i-9% yabasebenzi bayo
Emva kweenyanga ezininzi elindile, uElon Musk ugqibile ukwenza isicwangciso sakhe sokuhlengahlengisa iTesla ngokususa i-9% yabasebenzi.
Zonke iindaba ze-PlayStation kwi-E3 2018
Zonke ezi ziindaba ezivela kuSony zePlayStation ezithiwe thaca yiJapan yamazwe aphesheya kwi-E3 2018.
I-Xiaomi Redmi Qaphela i-5, sihlalutya i-terminal enenjongo yokuqhekeza intengiso
Sinayo iXiaomi Redmi Qaphela 5 kwaye siza kwenza uhlalutyo ngokusebenza kunye novavanyo lwekhamera ukuze ubone ukuba inakho na.
Ingqungquthela yokuqala ebalulekileyo ye-E3 2018 ibibalasele ngobuGcisa boMbane kwaye apho iindaba zibonakala ngokungabikho kwayo.
I-Porsche Mission E sele inegama lentengiso. Oku kuya kuba: yiPorsche Taycan, eyokuqala i-100% isithuthi sombane kwinkampani yaseJamani
I-Facebook ibonelele ngedatha yomsebenzisi kwezinye iinkampani. Fumana ngakumbi malunga nezivumelwano ekufanele ukuba inethiwekhi yoluntu ibonelele ngale datha.
Umyalezo we-Yahoo uya kunyamalala ngokupheleleyo kwinyanga ezayo, ukuba iyasebenza ngoku
Kwaye ndiqinisekile ukuba uninzi lwethu olukhoyo luye lwangena kule ngxoxo yasentsomini ethi ...
I-ZTE ifikelela kwisivumelwano ne-United States sokuqhubeka nokusebenza kwayo
I-ZTE ifikelela kwisivumelwano ukuze ikwazi ukuqhubeka nokusebenza. Fumanisa ngakumbi malunga nesivumelwano athe umenzi waseTshayina wafikelela kuso kunye ne-United States ukuze bakwazi ukubuyela kwimveliso.
IMicrosoft ifuna ukuphucula iinkqubo zokupholisa amaziko eenkcukacha ngokuzifaka phantsi kolwandle
UMicrosoft, emva kwenqanaba lokuqala leemvavanyo eliyimpumelelo, usandula ukubhengeza ukumiliselwa kwesigaba sesibini seProjekthi uNatick, ekungekho ngaphantsi kwe-864 iiseva ezifakwe phantsi kolwandle.
UTesla ubonisa umfanekiso wokuqala osemthethweni weModeli Y
UTesla utyhila umfanekiso wokuqala osemthethweni weModeli Y. Fumanisa ngakumbi ngemoto entsha yohlobo, eya kuba yiSUV encinci ekufuneka isungulwe kulo nyaka.
UNorman: Ubukrelekrele bokuqala bokucinga njenge-psychopath
UNorman: Ubukrelekrele bokucinga obucinga njenge-psychopath. Fumana ngakumbi malunga nobukrelekrele bokuzenzela obenziwe ngabaphandi eMIT.
Umculo wasimahla kunye neencwadi kunye nokubhaliselwa kweAmazon Prime
Isigebenga se-e-commerce sisandula ukwandisa inani leenkonzo esinikezela ngazo ngexabiso eliphambili kwiAmazon.
Iqinisekisiwe: IAmazon izakwazisa iEcho kunye neAlexa eSpain kulo nyaka
IAmazon iza kuphehlelela izithethi ze-Echo kunye ne-Alexa eSpain kulo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwezithethi ezitsha zohlobo lwaseSpain oluza kuthengiswa kungekudala.
Sivavanye i-Smart Force ebalulekileyo, i-Rowenta esemgangathweni ye-vacuum
I-Rowenta ibonise iqabane elifanelekileyo, i-Smart Force Essential, isicoci esisisiseko sokucoca iirobhothi ngayo yonke into esiyifunayo ukuze siqale kwihlabathi lokucoca ngokuzimela.
Abathengi beTesla bangazama i-autopilot entsha simahla. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokuvumela abathengi bazame ezi zincedisi simahla.
Ukuzimela ngakumbi kuzo zonke iintlobo zeelaptops enkosi kwi-Snapdragon 850
I-Qualcomm isandula ukubhengeza ukufika kwintengiso ye-Snapdragon 850 entsha, iprosesa evela kwi-Snapdragon 845 yokubonelela ngonxibelelwano olungcono, ukusebenza ngakumbi nangaphezulu kwako konke ukuzimela okuphezulu kakhulu.
IKhayaKit kunye neapp yasekhaya, iza kubulela iMac kwiMacOS Mojave
Ukuhambelana kweKhayaKit neeMacs kuza kubulela kuhlobo olutsha olunikezwe izolo ngabafana abavela ...
UTesla ubuyisele ngaphezulu kwe-20% yokubhukisha kweModeli 3
UTesla ubuyisele i-23% yokubhukisha kweModeli 3. Fumanisa ngakumbi malunga nokucinywa kwemoto ngenxa yeengxaki ezininzi kwimveliso yayo.
Zonke izinto ezintsha ze-iOS 12 eboniswe yiApple ngexesha leWWDC18
Sikuzisa isishwankathelo ngazo zonke iindaba ezithiwe thaca ngu-Apple ngexesha le-WWDC18 kwi-iOS 12 njengenkqubo yayo entsha yokwazisa kunye neNyaniso eNdisiweyo.
Isiphithiphithi esikhulu esiye saququzelelwa ngaphakathi kuGoogle emva kokufunda ukuba inkampani iyasebenzisana kuphuhliso lweqonga lobukrelekrele bokuzenzela elingenaphantsi kwePentagon.
UMicrosoft ubhengeza ukuthengwa ngokusemthethweni kweGitHub. Fumanisa ngakumbi ngalo msebenzi apho inkampani yaseMelika ibhengeza ukuthengwa kwekhowudi yokugcina iphepha.
Ezandleni zethu dFlow Umphefumlo, isithethi saseSpain esize kuhlala
Siphethe i-dFlow Soul, isithethi esingama-360º esibonelela ngesandi esifanelekileyo kunye neempawu zodidi lokuqala ngexabiso elinokufikeleleka kakhulu, hlala uhlalutyo lwethu.
I-Facebook izakususa icandelo elihamba phambili
I-Facebook izakususa icandelo elihamba phambili kule veki. Ukuphela kwecandelo lokuhamba kwenethiwekhi yoluntu kuyeza, esele isebenza kwizisombululo ezintsha.
I-Qualcomm ifuna ukunamathela entloko kwiikhompyuter zedesktop kunye ne-Snapdragon 1000
I-Qualcomm ifuna ukuqala ukuba yenye ye-Intel kusetyenziso olusezantsi / kwiidesktops zamandla nge-Snapdragon 1000
I-China ifuna abaphandi bangaphandle ukuba bancede bayile isikhululo saso sangexesha elizayo
Ngokuchasene noko bekusenzeka ukuza kuthi ga ngoku, i-China igqibe kwelokuba ivule iingcango zayo kubaphandi abavela kwihlabathi liphela ukuze basebenzisane kuyilo lwesikhululo sayo sendawo entsha.
I-Spotify ibuyela umva kumgaqo-nkqubo womxholo wenzondo
I-Spotify iyayilungisa imigaqo-nkqubo yayo yomxholo wenzondo. Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokubuya umva emva kwempikiswano yezi veki.
ICanon EOS-1V: Ikhamera ye-analog ayisathengiswa. Fumana ngakumbi malunga nokukhumbula ikhamera ye-analog yamva nje kuphawu lwaseJapan.
Ezi zeSimahla zokudlala kunye nokuPhila ngeMidlalo yeGolide kaJuni 2018
Apha ngezantsi sikubonisa ukuba yeyiphi imidlalo yasimahla esibonelelwa nguSony neMicrosoft ngeenkonzo zabo zokubhalisela iXbox kunye nePlayStation
Ukuwa kwe-76: I-Fallouth eNtsha ezisa iBethesda
Ukuwa kwe-76: Umdlalo omtsha we-Bethesda omangalisayo. Fumanisa ngakumbi malunga nekharavani entsha yenkampani yomdlalo, ethembisa ukuba yahluke kakhulu kolunye uthotho.
IMicrosoft isungula iwebhusayithi ekhuselekileyo yabantwana
I-MSN yaBantwana: Indawo yeendaba kaMicrosoft yabantwana. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale webhusayithi yenkampani ngeendaba kunye nomxholo wabantwana kuphela.
Iintsimbi zeminyango yekhamera zilungelelwano losuku kwaye namhlanje sineendaba ezimnandi kakhulu kwabo ...
Ngaphandle kwamathandabuzo, nditsho nemidlalo ayikhutshelwa ematyaleni kwaye kunjalo ePubg naseFortnite. Zombini…
Bafumana inqanaba lokuHanjiswa kweGazi kwiMiphefumlo eMnyama eyaKhunjulwa kwaye ikwaqhuba kwi-GTA V. Fumanisa eli bali linomdla eliza kuthi litsale ingqalelo yakho.
UXiaomi ulungisa ivenkile entsha esemthethweni kufutshane neVenkile yeApple ePuerta del Sol
Kwaye sisathetha ngeXiaomi kwiActualidad Gadget emva kohlalutyo olumangalisayo lweXiaomi Mi Mix 2S ...
I-Fortnite ilumkisa malunga ne-V-Bucks scams kwi-YouTube. Fumana ngakumbi malunga nala maqhinga afuna ukufumana idatha okanye imali kubasebenzisi kwimidlalo edumileyo ye-Epic Games.
Sinezandla zethu oko kubizwa ngokuba luPhezulu lweeKiller zalo nyaka 2018, iXiaomi Mi Mix 2S, ifowuni eza nezinto zodidi lokuqala kunye nokusebenza okungaqhelekanga.
Inkampani yaseJapan iqinisekisa ukuba ukuphela komjikelo wePlayStation 4 kwimarike sele kuza kwenzeka. Ke umhlaba ulungiselelwe ukufika kweconsole yakho entsha. Kungekudala siza kwazi ngakumbi ngezicwangciso zikaSony.
I-Xtorm yinkampani yamagqala kwiimveliso zokutshaja ngaphandle kwamacingo kwaye namhlanje sinenye yezona tshaja zabo zithandwayo ezandleni zethu, iXtorm Freedom.
UGoogle, u-Facebook kunye nokunye ngesele bayitsibe i-GDPR
Iinkampani ezinje ngoGoogle noFacebook batyholwa ngokuba sele bewuqabile umthetho wokukhusela idatha eYurophu, yiyo loo nto becelwa ukuba bahlawule izigidi ezingama-7.000 kubasebenzisi.
I-Acer Swift 5, sihlalutya enye yezona zibheja zibalaseleyo kwintengiso yokuzimela kunye nokuphatheka
I-Acer Swift 5, imodeli enamandla kakhulu ngaphandle kokukhanya kunye nokuphatheka kwayo. Masiyazi ngokusondeleyo, sikubonisa ilaptop enomthamo omkhulu phantsi kwee-euro eziliwaka.
I-Tesla Settles Class Action Actesuit ngokuchasene ne-Autopilot yayo
I-Tesla Settles Class Action Actsuit ngokuchasene ne-Autopilot yayo. Fumana ngakumbi malunga nokuhlawulwa kwenkampani kwiingxaki ze-Autopilot.
Izolo ibilusuku lokugqibela iinkampani kuye kwafuneka zilungelelanise uMmiselo omtsha woKhuseleko lweDatha (i-GDPR kwisifinyezo sayo ngesiNgesi)
I-United States iphanda ukuphathwa kwexabiso kwiBitcoin. Fumana ngakumbi malunga nolu phando lufuna ukwazi ukuba amaxabiso e-cryptocurrency enziwe na.
I-Spotify kuyakufuneka ihlawule i-112 yezigidi ukusebenzisa umculo ongenaphepha-mvume. Fumana ngakumbi malunga nemali ebalulekileyo ekufuneka ihlawulwe yinkampani.
Inkampani yaseAsia iVivo, ibhengeze ngokusesikweni ukuboniswa kweVivo APEX, indawo yokuqala efika kwimarike ngaphandle kolunye udini kwiscreen.
Uber ulungiselela ukuvula iZiko leTekhnoloji ePhambili eParis. Fumana ngakumbi malunga neziko elitsha lenkampani apho baya kuphuhlisa khona iiteksi zabo eziphaphazelayo.
Ngeli xesha sine-headset ye-Thrustmaster Y-300CPX Far Cruz Edition yemidlalo yentloko, iseti yentloko enesicwangciso esifanelekileyo nesandi, hlala nathi kwaye ufumane uhlalutyo olunzulu.
I-Facebook yenza ubukrelekrele bokuguqula iingoma kunye nezimbo zomculo
Fumanisa ngakumbi malunga nenkampani entsha yobukrelekrele obunakho ukutshintsha uhlobo lomculo ngokulula kwimizuzwana nje. Obu bukrelekrele bokufakelwa bu-Facebook buza kufika kwimarike kungekudala.
UGoogle utyholwa ngokuveza ngokungekho semthethweni amagama amaxhoba odlwengulo
UGoogle utyholwa ngokutyhila amagama amaxhoba odlwengulo. Iingxaki ezintsha zomthetho kwinkampani yaseMelika, etyholwa ngokutyhila amagama amaxhoba odlwengulo kwinjini yokukhangela.
IAmazon ithengise itekhnoloji yayo yokwamkelwa kobuso kubaphathi
IAmazon ithengise ubuchwepheshe bayo bokwazisa ubuso kwabasemagunyeni. Fumanisa ngakumbi ngenkqubo yenkampani, abathe bayithengisa kwizihlandlo ezahlukeneyo ukuze isetyenziswe ngabasemagunyeni.
Isizathu sokuba imoto ye-EmDrive ingenakwenzeka ukuba ibaleke ityhiliwe
Okokugqibela, uphononongo olwenziwe ngabaphandi abasuka kwiDyunivesithi yaseDresden bagqibe kwelokuba isiseko esiveliswe yimoto ye-EmDrive kungenxa yokunxibelelana kwayo nomazibuthe oveliswe nguMhlaba.
INetflix isayina isivumelwano nee-Obamas zokuphuhlisa iiprojekthi
INetflix kunye ne-Obamas zisayina isivumelwano sokwenza iiprojekthi. Ukutyikitywa okumangalisayo yiNetflix ebhengeza ukusebenzisana nee-Obamas zokuphuhlisa iiprojekthi ezidibeneyo.
I-Sasmsung Galaxy S9 + vs iPhone X emva kwenyanga yokusebenzisa, yeyiphi eyona ilungileyo?
Sicinga ukuba kufanelekile ukwenza uthelekiso phakathi kwezi, iiterminal ezimbini eziphambili ezikhoyo ngoku kwintengiso, i-iPhone X ngokuchasene neGPS S9 +, hlala ufumane uhlalutyo lwethu.
Intloko yeeteksi eziphaphazelayo zika-Uber zishiya umsebenzi wakhe
Umphathi weeteksi ezibhabhayo u-Uber uyarhoxa. Fumanisa ngakumbi malunga nokuyeka emsebenzini okuza kuvela kule nkampani, kule meko umntu ophethe eyona projekthi inomdla.
Ukukhwela inethiwekhi yetonela yeNkampani eBoring kuya kubiza idola
Iitonela zeNkampani edinayo ziya kubiza umsebenzisi idola. Fumanisa okungakumbi malunga nale projekthi ngu-Elon Musk ukuphucula ukuhanjiswa kwezithuthi.
Ezinye iiwebhusayithi eMelika ziya kuthintela ukufikelela kwiYurophu ngumthetho wokhuselo lwedatha
Fumana ngakumbi malunga nomlinganiso iiwebhusayithi ezininzi eMelika eziqwalaselayo kuba abanalo ixesha lokuziqhelanisa nomthetho omtsha wokukhusela idatha eYurophu.
I-Facebook isuse i-akhawunti ezizigidi ezingama-583 kulo nyaka
I-Facebook isuse i-583 yezigidi ze-akhawunti ezingeyonyani ngo-2018. Fumana ngakumbi malunga nenani elikhulu leeakhawunti ezingezizo kwinethiwekhi yoluntu osusileyo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Ngoku unokucela iMovistar ukuphinda kabini isantya sefayibha yakho
UMeyi 20 ufikile, ke ngoku singacela uMovistar ukuba andise isantya sonxibelelwano lwe-Intanethi njengoko kwabhengezwa kuDisemba ophelileyo.
Ividiyo ebonisa indlela uGoogle aqokelela ngayo eyona datha yabucala yabasebenzisi
Le vidiyo ibonisa izicwangciso zikaGoogle zokufumana idatha eyimfihlo ngakumbi. Fumana ngakumbi ngale vidiyo apho ungabona khona izicwangciso zenkampani zokufumana ulwazi ngakumbi malunga nomsebenzisi.
Ngaphandle kwayo yonke into, uTrump akazukukwazi ukuthintela ukohlwaywa ngokuchasene ne-ZTE
Kubonakala ngathi iinzame zika-Mongameli wase-United States, u-Donald Trump, zokuba bohlwaywe ...
Uhlalutyo lweWiko View 2, iimpawu zoluhlu olwahlukileyo oluphakathi
Jonga i-2, imodeli yesikrini sonke yoyilo olwahlukileyo. Hlala nathi kwaye ufumane ixabiso, amanqaku kunye nokusebenza kwayo, nakwividiyo. Uhlalutyo oluhle kwiSpanish.
I-Apple ithengise ii-HomePods ezingama-600.000 kwikota yokuqala yonyaka
I-HomePod ka-Apple ithengise iiyunithi ezingama-600.000 kulo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso anayo isithethi esinegama lebrendi, ezingagqithiyo kulindelo lwentengiso.
UTidal akahlawulanga iinkampani zerekhodi zamalungelo engoma iinyanga
UTidal akazibhatalanga iinkampani ezirekhodayo ngamalungelo kangangeenyanga. Fumana ngakumbi malunga nemicimbi emitsha echaphazela uTidal namhlanje.
Isamsung iya kusebenzisa iBixby kwizixhobo zayo
Isamsung iza kusebenzisa iBixby kwizixhobo zayo zasekhaya. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokwandisa ukusetyenziswa komncedisi wayo kwiimveliso ezingaphezulu kuluhlu lwazo.
I-Instagram iya kukwazisa ukuba lingakanani ixesha abalichitha yonke imihla kwinethiwekhi yoluntu
I-Instagram iya kukwazisa ukuba lingakanani ixesha olichitha eqongeni. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kungekudala kwinethiwekhi yoluntu.
I-YouTube yeNkulumbuso ithathe indawo yeYouTube Red kwaye iya kufumaneka eSpain
UGoogle uyenzile kwakhona into yayo kwaye utshintshe igama leenkonzo zayo kwakhona, ukuzama ukufumana indlela yokusasaza umculo kunye nevidiyo.
Yile nto inambuzane yokuqala yeerobhothi ekwazi ukubhabha ngaphandle kokusebenzisa iibhetri
Iqela leenjineli ezivela kwiDyunivesithi yaseWashington likwazile ukuyila nokwenza umatshini wesinambuzane esincinci seerobhothi esikwazi ukubhabha ngaphandle kokusebenzisa naluphi na uhlobo lwebhetri okanye uqhagamshelwe kumthombo wombane ngentambo.
Urhulumente waseDatshi uyayeka ukusebenzisa iKaspersky ngezizathu zokhuseleko
INetherlands iyayeka ukusebenzisa iKaspersky ngezizathu zokhuseleko. Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo sikarhulumente sokuyeka ukusebenzisa imveliso ephambili yenkampani yezokhuseleko yaseRussia.
Iipesenti ezingama-85 zenkcitho yeNetflix iya kumxholo wokuqala
I-Netflix ichitha i-85% yemali yayo kumxholo wayo. Fumanisa okungakumbi malunga notyalo mali olwenziwa yinkampani ekudaleni uthotho lwayo kunye neefilimu
I-OnePlus 6 isungulwe namhlanje, landela intetho ekhoyo apha
Inkampani ethandwayo i-OnePlus ibonisa namhlanje kwaye inkampani ine ...
I-Google Drayivu inciphisa amaxabiso eenkonzo zayo zokugcina kwaye itshintshe igama
Isigebenga sokukhangela silitshintshile igama lendawo yaso yokugcina, ukusuka kuGoogle Drayivu ukuya kuGoogle One, kwaye ithathe ithuba lokwandisa indawo yokugcina.
I-Facebook iyaqhubeka nokuphucula ubumfihlo kunye nokumisa izicelo ezingama-200 zokusetyenziswa gwenxa kwedatha
Inethiwekhi yentlalo yenza umsebenzi omkhulu wokucoca umfanekiso wayo emva kwehlazo leCambridge Analytica. UMark Zuckerberg,…
URick noMorty babuya neziqendu ezitsha ezingama-70
URick noMorty bavuselele iziqendu ezitsha ezingama-70. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvuselelwa kolu ngcelele emva kweengxelo zomnye wabayili bayo awayecinga ukuba iza kurhoxiswa.
Ivelufa ibhengeza ukunxibelelana kwamandla kweBluetooth esezantsi kuMlawuli wayo weSteam
Ivelufa ilungiselela umhlaba wokufika kwayo ngokusesikweni kwizixhobo ze-iOS nakwiiselfowuni. Oku kubonisa kwi ...
'Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo' yaxabisa i-1.600 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yenkulumbuso kwiscreen esikhulu kule veki kuye kwafuneka ibengaphambili ...
USony ubhengeza imidlalo eza kuboniswa kwi-E3 2018
U-Sony uqinisekisa ukuba imidlalo iya kutyhilwa e-E3 2018. Fumana ngakumbi malunga nemidlalo eya kuba nenxaxheba ephambili kumnyhadala kaJuni.
Iqela leenkwenkwezi libanga ukuba liyazi ukuba nini kwaye njani iSolar System yethu iza kuyeka ukubakho
Iqela leenkwenkwezi ezivela kwiYunivesithi yaseManchester bebesebenza kuthotho lwezibalo ukuqikelela ikamva leLanga lethu, ke ngoko, leleSolar System yonke.
Uber ukuqala kwakhona ukuvavanya iimoto ezizimeleyo kwiinyanga ezizayo
I-Uber kungekudala izakuvavanya iimoto ezizimeleyo kwakhona. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokubuya zizokuvavanya iimoto zayo emva kwengozi eyingozi ngoMatshi.
I-Facebook isebenza kwi-cryptocurrency yayo. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenethiwekhi yoluntu eziya kuthi zaziswe kwimarike yemali yedijithali.
I-Google Duplex ipasa uvavanyo lweTuring ngemibala endizayo
UJohn Hennessy, owayesakuba ngumongameli waseStanford kunye nomphathi weAlfabhethi, ucacisile kwinkomfa yoonondaba emva kwe ...
I-Google Drayivu iveza uyilo lwayo olutsha oluphefumlelwe uyilo lwezixhobo. Fumana ngakumbi malunga noyilo olutsha olwazisiweyo liqonga lokugcina ilifu.